China Umatshini wokucoca umoya ococekileyo Umgexo womoya ohlaziyekileyo eNtanyeni Ukwenziwa kunye nefektri | Saselux
Amandla (W): 1W
Qaphela (V): DC5V
Uhlobo: Ionizer yomoya
Isiqinisekiso: EMC, ce, ETL, RoHS
Igalelo ombane: DC5V
Ubukhulu: 89.3 * 56.7 * 24.3mm
Umthamo webhetri: 700mAh
Ukutshaja ixesha: 2H
Amandla (CFM): 180
Umthombo wamandla: Ibhetri, usb
①[Ucoceko olusebenzayo] Esi sicoci somoya sikhupha ion engaphezulu kwezigidi ezili-120 zokucoca umoya ukuze ususe ukungcola kwiindawo zobuqu. Inokuwucoca ngokufanelekileyo umoya ongcoliswe ngumoya wangaphakathi kunye nezinto eziyingozi zangaphakathi ngaphakathi ukuze uphucule imeko yakho kunye nokulala.
②[Iyaphatheka kwaye iyahlala] Esi sicoci somoya silula kwaye sihlangene. Inokuxhonywa entanyeni okanye emotweni. Inemfashini kakhulu kwaye inokusetyenziselwa ukwenza indawo ezicocekileyo, ezilungileyo zohambo, iindawo zikawonke-wonke okanye ezinye iindawo ezinomgangatho womoya ombi. Vumela umoya omtsha uhlale nawe ngonaphakade.
③[Akukho Ngxolo nohlengahlengiso lweGiya] Isandi sithule kakhulu ngexesha lokusebenza, kwaye asizukuphazamisa ngexesha lomsebenzi okanye lokuphumla. Umsebenzi ulula kakhulu, cofa nje iqhosha lemizuzwana emibini ukonwabela umoya omtsha. Esi sacholo somgexo sisebenza ngakumbi kunezinye iibrand zokucoca umoya. Ungaqwalasela umoya wakho we-butler ngokwemimandla eyahlukeneyo.
④[Ubomi bebhetri obungapheliyo] Isicoci somoya esicocekileyo sinendawo yokutshaja ye-USB, enokusetyenziselwa malunga neeyure ezingama-60 emva kweeyure ezi-2 zokutshaja ukuqinisekisa umoya omtsha kunye nokukhusela ngexesha lomkhuhlane.
⑤[Inkonzo egqibeleleyo emva kokuthengisa] Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nokusebenzisa iimveliso zethu, nceda unxibelelane X.Ping nge-imeyile, siya kusombulula zonke iingxaki kuwe, sibuyisele iimpahla okanye sinike imbuyekezo epheleleyo. Ukwaneliseka kwabaThengi yinjongo yethu, kwaye siya kuyanelisa yonke into
Egqithileyo Uhlobo oluhle lwe-LED Phuma uphawu lwamkelwa yiYurophu
Okulandelayo: I-Smart App yoLawulo lwe-Ambient Light 2 Packs
Isixhobo sokucoca umoya esicocekileyo seDesktop
I-CE HEPA UV isiCoci soMoya